Nye na ebe nchekwa - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Zọ ndị a ga-esi nye onyinye > Nye na ebe nchekwa
Nye onyinye ma ọ bụ kpata ego maka ncheta mmadụ
Mee ememe ndụ onye ị hụrụ n'anya site n'inye ihe na ebe nchekwa ha, ma nyere aka na-akwado ego ọrụ na-agbanwe ndụ maka ndị mmadụ na mpaghara gị.
Inye onyinye ma ọ bụ inweta ego na ebe nchekwa bụ ụzọ pụrụ iche ma baa uru iji mee ndụ onye ị hụrụ n’anya. Anyị na-emetụ anyị n’obi ma na-enwe ekele mgbe niile ịnata onyinye ndị a, na ịsọpụrụ na icheta onye ị hụrụ n’anya, ị na-enye olileanya ma na-enye aka ime ka ndụ ka mma maka ndị obodo ahụ nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka.
Melite akwụkwọ onyinye Inchekwa
Nwere ike mepee peeji nke iji cheta onye ị hụrụ n'anya, ebe ndị enyi na ndị ezinụlọ nwere ike inye onyinye, hazie mmemme ego na ịkekọrịta ncheta.
Hazie nchịkọta olili ozu
Ịrịọ onyinye n'oge olili ozu ma ọ bụ ncheta nke onye ị hụrụ n'anya, ma ọ bụ ịhazi nchịkọta olili ozu n'ịntanetị, bụ ụzọ magburu onwe ya isi nyere ihe ndị na-eche banyere ha aka.
Chetara onye ị hụrụ n'anya onyinye gị Bromley, Lewisham & Greenwich Mind.
Onyinye dị na mpempe akwụkwọ nchekwa
Budata mpempe akwụkwọ anyị, Onyinye na ebe nchekwa, maka echiche ndị ọzọ gbasara otu ị ga-esi mee ememe ncheta nke onye ị hụrụ n'anya.